Cali Dheere oo ku hanjabay in weeraro kale ay ka fulinayaan dalka Kenya, haddii ciidamada Kenya laga saarin Somaliya - iftineducation.com
iftineducation.com – Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere), Afhayeenka Guud ee Ururka Al Shabaab, ayaa waxa uu ku cago jugleeyay in weeraro hor leh ay ka geysanayaan dalka Kenya, haddii Dowladda Kenya aysan ciidamadeedu kala bixin Somaliya.
Afhayeenka, ayaa waxa uu Kenya ku eedeeyay inay duulaan ku tahay Muslimiinta ku dhaqan Geeska Afrika, iyadoo kula jirta dagaal ka dhan ah Diinta Islaamka, sida uu hadalka u dhigay.
“Ummada Muslimka ah ee ku nool Geeska Afrika waxaa dagaal qayixan oo bareer ah, oo ku saabsan dhabar-goynta Diinta Islaamka ku soo qaaday Dowladda Nasaarada ah ee Kenya, iyadoo ku soo duushay Wilaayaadka Islaamka ah, meelo badan oo ka mid ah, baaba’isay dad badan oo Muslimiin oo reer miyi ah, shaqadoodii baaba’isay, reerahoodii gubtay, qabsatayna dhulal ka mid ah dhulalka Muslimiinta ah.” ayuu yiri Afhayeenka Guud ee Al Shabaab.
Waxa kaloo uu tilmaamay in Dowladda Kenya ay dhibaato joogto ah ku heyso Muslimiinta Wadanka Kenya, ee ku nool Gobolka Xeebta, isla-markaana ay ku fashilmatay inay joojiso waxyeelada ka dhanka ah Muslimiinta.
Sheekh Cali Dheere, ayaa xusay inay marar badan Dowladda Kenya kaga diggeen dhibaatada ay ku heyso ummada Muslimiinta ah, hase ahaatee ay ku dhiiratay inay dhibaateyso, taasina ay keentay inay ka fal celiyaan.
Sidoo kale waxa uu tibaaxay in Diinta Islaamka ay qabto in cidii ku dulmiso aad iska difaacdo, gaar ahaan haddii ay yihiin Masiixiyiinta, ayna waajib tahay in lala dagaalamo, haddii dhulka Muslimiinta ay soo galaan.
“Fardul ceyn waajib ah weeye, haddii gaaladu ay dhulka Muslimiinta ah soo gasho, oo meelo ka mid ah qabsato in laga difaaco. Haddii dad Muslimiin ah ay xirato, xad gudub u geysato in laga difaaco.” ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
Mar uu soo hadalqaaday weerarkii ay xalay ka geysteen dalka Kenya, ayuu yiri “Mujaahidiintu ayaa waxay bilaabeen aargoysi, aargoysigaasi marar badan ayuu ku dhacay Kenya, tii ugu dambeysay markaan ka soo qabano ayaa xalay Mujaahidiintu waxay weerareen magaalo ku taala Kenya gudaheeda, qaasatan Gobolka Waqooyi Bari, halkaasi oo ay ku qabteen rag badan oo Nasaara ah, in badan oo ka mid ahna inay halkaasi ku laayaan.”
Cali Dheere, ayaa weerarada ay ka fulinayaan dalka Kenya waxa uu xudun uga dhigay mid ay nabaro ku gaarsiinayaan shacabka reer Kenya, oo uu ku eedeeyay inay dhabarka ka riixayeen in Ciidamada Kenya ay soo galaan Somaliya.
“Taa macnaheedu waxaa weeye shacabka Kenya ee wiilashooda u sacbinaayay, Dowladooda u sabcinaayay, una soo diray gudaha Somaliya, gadaalna uga faraxsanaa in dadka Muslimiinta ah la baaba’iyo inay dhadhamiyaan, oo ay arkaan xanuunka ay lee dahay dhimashada.” Sidaasi waxaa yiri Cali Dheere oo la hadlay Warbaahinta afka Shabaabka ku hadasha.
Meydadka dadkii ay Shabaabku xasuuqeen oo laga daad gureeyay duleedka Mandheera (Daawo Sawirada)